FANASANA MÔTÔ NAMPIDI-DOZA :: Mitantara ny fangirifiriana sy ny alahelo niainany ny naman’ny maty • AoRaha
FANASANA MÔTÔ NAMPIDI-DOZA Mitantara ny fangirifiriana sy ny alahelo niainany ny naman’ny maty
Nindaosin’ny fahafatesana, ny alatsinainy 8 oktobra lasa teo, i manampisoa evanue harintsoa danielson. ilay tovolahy 24 taona voafaokan’ny fiara teny ambonin’ny “moto cross”, tetsy ampasika, tokony tamin’ny 8 ora sy sasany alina. avy nanasa ilay “moto cross” teny amin’ny fokontany 67 ha, hitodi-doha hamonjy fodiana, izy roa lahy izao tra-doza izao. Voadona mafy teo amin’ny lohany raha nahazo ny riran’ny “trottoir” rehefa avy nipitika avy eny ambony môtô ilay nipetraka teo aoriana. Torana tsy nahatsiaro tena kosa ny mpitondra ity kodiaran-droa. Mitantara ny fisehon’ny loza sy ny fangirifiriana niainany ity farany.
Zanaka faharoa amin’izy efatra mianadahy sady lahimatoa, nateraky Rasoamampionona Daniel sy Rasoamampionona Marie Henriette, i Manampisoa Evanue Harintsoa Danielson. Vao nahavita fianarana, ka nahazo ny diplaôma “Licence en Gestion&Management”, izy fony fahavelony ary an-dalam-pitadiavana asa. Olona sariaka sady tsotra Danielson raha teo anivon’ny fianakaviana ary mpivavaka be. “Amin’ny maha lahimatoa azy dia izy no anisan’ny mpananatra sy mpanoro anay iray tampo aminy, ankoatra an’i Dada sy Neny. Tsy masiaka izy fa tsotra be. Ary ny tena mampiavaka azy dia izy olona tia mivavaka sy matahotra an’Andriamanitra”, hoy Razanarivo Voahangy, anabaviny sady vavimatoa. Nandritra ny fiavian’ny orana no nitranga ny loza. Nisongona bisikileta teo alohany izy roa lahy no voatrongy avy ao afara. Nipitika avy teny ambonin’ny môtô i Manampisoa Evanue Harintsoa Danielson, izay nipetraka tao aoriana. Nidona mafy tamin’ny riran’ny “trottoir” ny lohany ary torana tsy naha­tsiaro tena ny namany. Vokatr’io dona mafy io no nitarika ny fahafatesany raha ny filazan’ny mpitsabo. Vokatry ny fahatoranana dia tsy nahatsikaritra ny mombamomba ilay fiara nandona azy ireo ilay namany, namily ny môtô noentin’izy ireo.
Tsy lasa lavitra
Tratra hariva teny 67Ha, Manampisoa Evanue Harintsoa Danielson, tamin’io alahady 8 oktobra io ary hitodi-doha hody. Avy nanasa ny “moto cross” kosa ny namany, izay iray tanàna aminy. Sendra nifanojo lalana fotsiny izy ireo fa tsy niaraka nanasa môtô, tsy akory.“Fahazarako ny manasa io môtô io isaky ny tapa-bolana eny 67Ha. Anarany fotsiny hoe nosasana fa tratran’ny orana teny an-dalana rehefa handeha hody. Vao niala kelikely teo amin’ny toerana nanaovana “lavage” aho dia nahita an’
i Daniel. Tsy lasa lavitra akory ny dianay roa lahy dia nitranga ny tsy nampoizina”, hoy Randrianarijaona Tiana, nitondra ilay môtô.“Nisy bisikileta teo alohanay. Iny handeha hisongona io bisikileta io iny indrindra izahay no voafaoka avy ao afara. Mafy ny fandonan’ilay fiara anay satria nipitika nankany alohako izy ary nidona tamin’ny “trottoir” ny lohany. Ny jiron’ny fiara nandona anay no tazako nanjavozavo satria izaho koa nianjera teo ambonin’ny arabe. Niezaka niarina ihany aho hijery an’i Daniel satria hitako fa mafimafy ihany ny fianjerany. Izay no tadidiko farany dia izaho efa eny ambonin’ny fandrian’ny hôpitaly indray vao nahatsiaro saina”, hoy hatrany izy nanohy ny tantarany.
Toy ny tanora rehetra dia anisan’ny mpiserasera mavi­trika ao anatin’ny tambajotra sôsialy “Facebook”, i Manampisoa Evanue Harintsoa Danielson. “Isan’andro izy dia mandefa andinin-tSoratra Masina amin’ny pejiny. Olona tia fivavahana izy. Matetika mitory teny aminay ato an-trano izy. Efa nandindona azy, angamba, izao fahafa­tesany izao fa arakaraka ny nitomboan’ny taonany no nanakaikezany an’Andriamanitra. Mino aho fa efa eo akaikin’Ilay Mpahary ny fanahiny, amin’izao fotoana izao”, hoy Razanarivo Voahangy.
Manana ny fialam-boliny manokana Itompokolahy, fony fahavelony. “Ny lalao baolina kitra no tena fanatanjahantena tiany. Mahavita mifoha maraina mihitsy rehefa misy lalao baolina kitra malaza eny Mahamasina. Milalao baolina kitra eto amin’ny fokontaninay ihany koa izy”, hoy hatrany ity anabaviny.
Nalaky nahare ny zava-nitranga ny fianakaviana. “Nisy olona mpiara-monina aminay no nilaza taty an-trano fa toa mitovy amin’ny môtônay no tratran’ny loza eny Ampasika. Nizara roa izahay tato an-trano. Ny sasany nankeny Ampasika ary ny sasany teny amin’ny hôpitaly”, hoy Razanarivo Voahangy.Nitsoaka nandositra ilay fiara nahavanon-doza. Tsy nisy nahatsikaritra ny marika na ny laharan’ny fiara sady ny andro rahateo efa alina sy avy ny orana. Teo anelanelan’ ny Microcred sy trano fisakafoanana “Gastro pizza”, etsy Ankasina no nisian’ny fifandonana.
“Manoloana izao fahoriana nidona tampoka teto anivon’ny fianakaviana dia manao antso avo amin’ireo nahita sy nahatsikaritra io fiara nandona an’i Daniel io. Tsy hisy
ny arakaraka raha toa ka manome loharanom-baovao ary angatahana fiaraha-miasa amin’ny olona tsara sitrapo. Hatreto dia tsy mbola fantatra ny fiara nahavanon-doza
na ireo manodidina tsy nahatsikaritra fa izy ireo efa niharan-doza no nahataitra ny manodidina. Isaorana manokana kosa ireo nitondra azy ireo teny amin’ny hôpitaly sy niandry ny môtô mandra-pahatongan’ny fianakaviana teny an-toerana”, hoy hatrany i Voahangy.
Nalevina any Anosibe Manjakandriana, ny zoma 12 oktobra 2018, ny nofo mangatsiakan’i Manampisoa Evanue Harintsoa Danielson.
FIAINANA MPANAKANTO :: Mpitsabo mpanampy miangaly ny rock mavesatra i Thierry Dekapy
FIAINANA MPANAKANTO :: Mitantara ny fanenjehan’ny sasany azy ao amin’ny « Facebook » i Johane